profile shirkadda - Zhongshan Maoshuo Technology Co., Ltd
Zhongshan Mao Shuo Technology Joint Stock-Co., Ltd waxaa la aasaasay sanadkii 2008, iibiyeyaasha nidaamka codsiga tamarta. Calan R & D, wax soo saarka, marketing, adeega sida mid ka mid ah nalalka dibadda ah, qoraxda awood jiilka looxaanta iyo korontada oo ka mid ah shirkadaha teknoolojiyad sare ee qaranka. Ayaa maray "ISO9001: 2008 nidaamka maamulidda tayada ee caalamiga ah shahaado" iyo "ISO14001: 2004 shahaado nidaamka maamulka deegaanka caalamiga ah.". Guuleystay "warshadaha nalalka qaranka brand caan ah", "brand caanka Shiinaha", oo sannado badan lagu qiimeeyo sida "ayuu qandaraas iyo ganacsiga Aamin" horyaalka sharaf, taas oo leh Maoshuo (Hijmans) Shirkada saamileyda ah ee sayniska iyo tiknoolajiyada iyo ganacsiga (Guangdong) Co., Ltd.
waxyaabaha nalalka dibada hubkaas ayaa loo isticmaalaa in waddooyinka degmada, tamarta lagu badbaadinayo Mashaariicda nalalka, dhismaha miyiga cusub, mashaariicda nalalka waddooyinka, nalalka muuqaalka iyo mashaariicda kale ee tamarta lagu badbaadinayo cagaaran. Iyo mashaariic LED wadada nalalka, iftiinka muuqaalka, nidaamyada korontada looxaanta qoraxda, adeegyada ilaalinta tamarta iyo codsiyada maamulka tamarta, mashaariic dalka oo dhan, iyo dhoofiyo Southeast Asia, Central Asia, Europe iyo Maraykanka iyo dalalka kale iyo gobollada.
"Wadista dunida iyo dhulka la huriyo" waa ergo sii kordhaysa ee shirkadda si ay u dhisaan our hooyo caadi ah iyada oo loo marayo habab joogto ah technology tamarta, carbon hooseeyo, keydinta tamarta, yareynta warshadu hawada iyo daydo horumar waara.
Focus on tamarta fiican - technology Mao Shuo!